तपाईंको हातमा पैसा बच्दैन ? यी तरिका अप्नाउनुहोस् - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ २९, बुधबार १९:११
अहिले मानिसहरुलाई सताउने मध्ये एउटा कारण हो कमाइ। मानिसलाई कमाइले जति सताइरहेको छ त्योभन्दा बढि उनीहरुले बचाउन नसकेर समस्यामा परेका छन्।
त्यसैले पनि मानिसहरुले भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘मेरो हातमा त पैसा नै बच्दैन के गर्ने ?’ यदि तपाई पनि पैसा बचाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो गर्नुहोस्।
१) खर्चलाई टिप्ने बानी बसालौं
तपाईले पैसा बचाउन चाहानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जागर चलाएर हरेक दिन गर्ने खर्चलाई टिप्ने बानि बसाल्नुहोस्। ‘एक हजारको नोट जब साटिन्छ, त्यो कहाँ जान्छ थाहा नै हुँदैन।’ मानिसहरुले धेरै गर्ने गुनासोमा यो पनि पर्छ। मानिसहरुको हातमा पैसा भएपछि त्यो कतिबेला खर्च भयो भन्ने नै मानिसले थाहा पाउँदैनन्। दुध, चिया, पत्रिका, तरकारी, आदिमा दैनिक रुपमा खर्चका शिर्षकहरु हुन्। यस्ता सानासाना आवश्यकतामा खर्च भइरहेपनि मानिसहरुलाई यसको बारेमा थाहा भइरहेको हुँदैन।
त्यसैले दिनभरिमा गरेको खर्चलाई बेलुका घरमा पुगेर त्यसलाई डायरीमा टिप्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईले दिनभरिमा गरेका खर्चको जानकारी हुन्छ। यसले भोलिपल्ट हुने खर्चलाई बचाउँछ अथवा भोलिपल्ट पैसा खर्च गर्नु अघि एक पटक अघिल्लो दिनको खर्च याद हुन्छ।
२) खर्चको योजना बनाउनुहोस्
तपाईले मासिक रुपमा गर्ने खर्चको पहिले नै योजना बनाउनु आवश्यक छ । यदि पैसा बचाउने हो भने, यो महिना कति खर्च गर्ने भन्ने पहिले नै योजना बनाउनु पर्छ । यसले तपाईको आवश्यकता के र त्यसमा पनि प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग गर्छ ।
यसरी महिनामा गर्ने खर्चलाई पहिले नै योजना बनाएको हुनाले विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने छैन ।
३) पैसा बचाउने योजना
तपाईसँग हरेक महिनाको आम्दानीको विवरण आएपछि त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि योजना बनाउनु पर्छ । मानिसका आवश्यकता धेरै हुन्छन् तर आम्दानी सिमित हुने भएकोले त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यसरी लगाउनुहोस् लिपस्टिक, आकर्षक देखिन्छ !
खर्चको विषयमा योजना बनाउँदै सँगसँगै बचतको विषयमा पनि योजना बनाउनु पर्छ । हरेक महिना हुने आम्दानीको २० देखि ३० प्रतिशत सम्म बचत गर्ने बानी गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
हामीले महिनाको अन्त्यमा तलव पाउने वित्तिकै, बैंकमा अर्को छुट्टै खाता बनाएर त्यसमा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । जुन पैसा अत्यावश्यक बाहेक अन्य बेलामा प्रयोग नगर्ने विषयमा आफुलाई दह्रो बनाउनु पर्छ ।
४) उद्देश्य निधारण गर्ने
हामीले कुनै उद्देश्य नराख्नाले पनि पैसा बचत गर्न सकिरहेका छैनौं । पैसा बचत गर्दैगर्दा यति महिना पछि यति पैसा जम्मा गरेर यो कुरामा खर्च गर्छु भन्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसरी खर्चको उद्देश्य निर्धारण गर्दा बचत गर्नमा प्रोत्साहन मिल्छ । मानौं यो दशैमा मोटरसाइकल किन्ने वा ल्यापटप किन्ने उद्देश्य राखियो भने दशै सम्ममा गर्ने विभिन्न खर्चलाई बचाएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नमा निकै मेहनत गरिन्छ ।
यस्तै घर किन्ने वा गाडि किन्ने बेलामा पनि यसको सबै मुल्य यति महिना भित्र तिर्नेछु भन्ने उद्देश्य निर्धारण गर्दा अन्य फजुल खर्च बचाउन सकिन्छ।
यसरी खर्चको उद्देश्य बनाउँदा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन बनाउनु पर्छ । छोटो समयमा पुरा गर्ने उद्देश्यलाई अल्पकालिन उद्देश्यमा राख्ने, यस्तै केही लामो लाई मध्यकालिन र निकै लामो खालको उद्देश्यलाई दिर्घकालिन बनाउने जस्तै छोराछोरिको शिक्षा । यसको लागि अहिले देखिनै बचत गर्ने ।
५) प्राथमिकता छनोट गर्ने
हामीले अत्यावश्यक वस्तु वा आवश्यक आवश्यकताका रुपमा कहिल्यै पनि छुट्याएका हुँदैनौं । त्यसैले गर्दा हामीसँग पैसा भएको बेलामा अगाडि जे देखिन्छ त्यसैमा खर्च गछौं । यसैले गर्दा हामी हामीलाई अत्यावश्यक आवश्यकतामा थप पैसा खर्च हुने संभावना हुन्छ । यसैले बेलैमा प्राथमिकता छनोट गर्दा पैसा बचत गर्न सहयोग मिल्छ ।
६) बढिरहेको बचतको बारेमा जानकारी लिइरहने
बैंकमा भएको बचतलाई बेलाबेलामा गएर हेरिरहने बानि गर्नाले पनि बचतलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग मिल्छ । यसरी बचत हेरिरहँदा अघिल्लो महिनाको बचत भन्दा कम भएमा त्यसले झस्काउँछ । यदि अघिल्लो महिनाको भन्दा धेरै बचत देखिएमा त्यसले अर्को महिना त्यो भन्दा धेरै बचत गर्न पनि प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ । यदि यसरी बचत हेरिरहँदा अघिल्लो महिना भन्दा कम भएमा कारणको खोजि गरि अर्को महिना देखि त्यसलाई समाधान गरि पुनः बचत बढाउन सकिन्छ ।
७) साप्ताहिक रुपमा खर्च गर्ने
हामीले कुनै पनि वस्तुको आवश्यकता परेमा जति वेला आवश्यकता पर्यो। त्यति बेला नै किन्ने बानी हुन्छ। तर, यो निकै नराम्रो बानी हो। हप्ताभरि आवश्यक पर्ने वस्तुलाई पहिले नै टिपोट गरेर हप्तामा एक पटक मात्रै खर्च गर्दा अनावश्यक खर्च कम हुन्छ। यस्तै, एकै पटक एउटै पसलमा गएर सामान खरिद गर्दा पसलबाट छुट पनि पाइने संभावना हुन्छ।
८) घरमा खाने बानी बसाल्ने
हामी बिहानै उठेपछि चिया खानको लागि बाहिर निस्कन्छौ। यसले गर्दा अस्वभाविक रुपमा हाम्रो खर्च बढिरहेको हुन्छ। सकेसम्म घरमा नै बनाउन सकिने खानेकुरा घरमा नै खाने बानीले पनि बचत बढाउन सकिन्छ।
हामी अल्छीले गर्दा खाना पनि बाहिर खाने वा खानाको सट्टा रेडिमेट वस्तु खाने गर्छौं। यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै बचतमा पनि सहयोग मिल्छ।
बिर्सने बानीले सताएको छ ? अप्नाउनुहोस् यी उपाय
ग्लोबलआइएमई बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सबीच सम्झौता
दुर्लभ पेन्गुइनलाई न्यूजील्यान्डमा ‘वर्षको चरा’ उपाधि
आफ्नै पतिसँग यौन सम्बन्ध राख्दा महिलाको मृत्यु
होटलमा चर्को संगीत बजेपछि गोहीको मृत्यु
भारतीय क्रिकेटर सचिनले गरे पशुपतिको दर्शन
हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै ७२ घण्टे सत्याग्रह
आज कर दिवस : सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिँदै
आइतबार, निकै राम्रो छ यी ८ राशिको भाग्य हेर्नुहोस्, दैनिक राशिफल
काठमाडौँको बानेश्वरमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एकको मृत्यु
नाइट क्लबमा भेटिएपछि विमलसहित चार फुटबलर निलम्बित
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापा
आलमलाई नख्खु कारागार ल्याइयो
बानेश्वरमा मोटरसाइकल दुर्घटनाः प्रहरी जवानको ज्यान गयो